Shirkadda Shiinaha ee FRP beebka iyo Warshadda | Zhaofeng
Tuubooyinka FRP waa nooc ka mid ah biibiile aan macdan lahayn oo leh culeys khafiif ah, xoog badan iyo iska caabinta daxalka. Waa fiber galaas ah oo leh saldhig cusbi ah oo leh cufnaan gaar ah taas oo ah lakabka nabarka ee lakabka ku dul yaal caaryada asaasiga ah ee wareegsan sida waafaqsan shuruudaha hannaanka. Qaab dhismeedka darbiga tuubada waa mid macquul ah oo horumarsan, kaas oo siin kara ciyaar buuxda doorka maaddada. Iyada oo la raacayo horudhaca xoogga isticmaalka, waxay hagaajineysaa adkaanta waxayna hubisaa xasilloonida iyo isku halaynta alaabta. Tuubooyinka FRP waxaa loo isticmaalaa warshadaha batroolka, kiimikada iyo biyo -mareenka. Hebei Zhaofeng FRP waxsoosaarka dhuumaha ayaa si xawli ah u kobcaya, tiraduna waxay sii kordhaysaa sannadba sannadka ka dambeeya, iyo baaxadda dalabka iyo waaxyadu waxay noqonayaan kuwo ballaadhan oo ballaadhan.
Tuubooyinka FRP waxay ka samaysan yihiin cusbi (cusbi heerka cuntada ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qaado biyo la cabbo), fiber galaas, iyo ciid quartz sida alaabta ceeriin ah, waxaana lagu sameeyaa hab gaar ah.
1 Kala soocida dhuumaha
2 Astaamaha qaabdhismeedka
3 Astaamaha dhuumaha
4 Qalab ceyriin iyo kaabayaal ah
5 Heerka codsiga
(1) Kala soocidda tuubooyinka FRP
9 sida caadiga ah loo isticmaalo kala soocidda tuubooyinka FRP:
(1) Dhuumaha qashin -qubka ee FRP
(2) Beebka ciidda ee FRP
(3) Dhuunta cadaadiska ee FRP
(4) FRP tuubada ilaalinta kabka
(5) Dhuumaha biyaha ee FRP
(6) Tubbada dahaarka ee FRP
(7) Marinka hawo -qaadashada FRP
(8) Dhuumaha bullaacadaha ee FRP
(9) Jebinta dhuumaha FRP
(10) FRP tuubo tabin toosan
Astaamaha qaabdhismeedka dhuumaha FRP
Waxay leedahay iska caabin daxalka aad u fiican
Ma jiro kahortag ka-hortagga daxalka iyo tallaabooyinka kale ee ka-hortagga daxalka ma u horseedi doonaan wasakhda labaad biyaha iyo warbaahinta kale. Badeecadu waxay leedahay nolol adeeg dheer.
Miisaanka dhuumaha ayaa ah 1/4 oo kaliya tuubada birta ductile ee isla tilmaanta iyo dhererka, iyo 1/10 ee tuubada sibidhka. Way ku habboon tahay in la raro, la raro oo la dejiyo, oo si sahlan loo rakibo.
Yaree kala -goysyada dhuumaha, dardar galinta xawaaraha rakibidda, iyo hagaajinta tayada dhuumaha oo dhan.
Iska yaree iska caabin socodka, kordhi socodka socodka, oo yaree isticmaalka tamarta. Isticmaalka tuubooyin dhexroor yar si ay u raacaan dareeraha isla socodka socodka ayaa kordhin kara heerka socodka ilaa 10% marka la barbardhigo tuubooyinka birta ee isla tilmaanta; ma cabirto mana yarayso heerka socodka ka dib isticmaalka muddada dheer. Ilaalinta fiilooyinka ee deegaanka faragelinta iyo daxalka culus ayaa leh saameyn wanaagsan.
Astaamaha dhuumaha dhuumaha FRP
(1) Iska caabinta daxalka: walxaha kiimikada ah ee aan firfircoonayn, iska caabinta daxalka ee aadka u fiican, iyo dhuumaha kala duwan ee u adkaysta daxalka ayaa la dooran karaa iyadoo loo eegayo dhexdhexaadinta gudbinta.
(2) Awood farsamo oo sarreeya: iska caabbinta cadaadiska biyaha, iska caabbinta cadaadiska dibedda iyo iska caabbinta saamaynta ayaa dhammaantood wanaagsan, iyo tuubooyinka iyo rakibidda waa la naqshadeyn karaa oo la soo saari karaa iyadoo la raacayo cadaadiska loo baahan yahay.
(3) La -qabsiga heerkulka oo xoog leh: Heerkulka hawlgalka: ka weyn -70 digrii Celsius iyo wax ka yar 250 darajo Celsius, dhuumaha ma ku dillaaci doonaan warbaahinta barafoobay.
(4) Iska caabbinta dareeraha waa yar tahay: gidaarka gudaha ee dhuumaha waa siman yahay, isku -dheelitirnaanta cufnaanta waa 0.0084, dhexroorka tuubada waxaa lagu dhimi karaa isla heerka socodka.
(5) Miisaan khafiif ah iyo cimri dherer adeeg: culeys khafiif ah, gaadiid ku habboon, kharash dhisme oo hooseeya, dayactir la'aan, iyo nolol adeeg oo ka badan 50 sano.
(6) Joogtee tayada biyaha: aan sun ahayn, gaadiid biyo la cabbo, oo ilaaliya tayada biyaha muddada dheer iyo fayadhowrka.
Qalab ceyriin iyo kaabayaal ah oo loogu talagalay tuubooyinka FRP
Cusbi, derin fiber galaas, fiber galaas, iwm
Baaxadda dalabka ee tuubooyinka FRP
1. Dhuumaha gudbinta kiimikada ee dhexdhexaadka ah
2. Hoolalka farsamada ee kala duwan (farshaxanka kiimikada, farshaxanka samaynta waraaqaha, farsamooyinka daaweynta bullaacadaha, farsamooyinka dheellitirka biyaha badda, farshaxannada farsamaynta cuntada iyo sharaabka, farsamada caafimaadka, iwm.)
3. Cadaadis tuubooyinka biyaha ee saldhigyada yar -yar ee korontada ee dhulka, wareegga tuubooyinka biyaha ee xarumaha korontada
4. Ururinta bullaacadaha iyo dhuumaha gaadiidka
5. Cabbitaanka dhuumaha jirridda gaadiidka biyaha iyo tuubooyinka qaybinta biyaha
6. Tuubbada duritaanka biyaha ee Oilfield iyo tubbada gaarsiinta saliidda qaydhiin
7. Tubada gudbinta tamarta kulaylka, tuubada gudbinta biyaha badda
8. Tuubooyinka waraabka ee mashiinada beeraha
9. Tuubo faaruq ah, tuubo cadaadis dibadeed iyo tuubbo siphon ah
Hore: Fiberglass Tower - Flange Looper - Zhaofeng
Xiga: FRP dhuumaha Anti-static